ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5သင်ပထမဦးစွာနေ့စွဲတွင်ပြန်မေးသင့်ပါတယ်မေးခွန်းများ
အားဖြင့် Samantha Greaves
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 15 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ပထမဦးစွာရက်စွဲများအင်တာဗျူးများကဲ့သို့ဖြစ်ရနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့မေတ္တာကိုအသက်အဘို့အ. သူတို့သည်သင့်အာရုံကြောနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားနှစ်ခုလုံးလုပ်. တစ်ခါတစ်ရံအသင်ကိုယ်တိုင်ဒါကြောင့်ရက်စွဲ၏အဆုံးအားဖြင့်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့နေ့စွဲရဲ့အကြံအစည်အားဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရှာနိုင်, သင်ကသူတို့ကိုဘာမှလေ့လာခဲ့ရတဲ့နားလည်သဘောပေါက်.
ဤ5မေးခွန်းတွေကိုနောက်တဖန်သင်တို့ကသူတို့ကိုမြင်ခြင်း၌စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ် အကယ်. သင်စိတ်ချလက်ချကို သိ. ရှားသင့်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ရက်မှကျင့်သောသေချာပါမည်.
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေအများကြီးကိုယ့်အကြောင်းပြောနေတာကိုချစ်ကတည်းကဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့တစ်ဦးဖြစ်သည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ယနေ့အထိအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုဖွင့်နှင့်အမှန်တကယ်သူတို့ကိုဝမ်းမြောက်စေ၏အဘယ်အရာကိုသင်ယူဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု. အများအားဖြင့်သင်သည်ဤမေးခွန်းကိုမေးသောအခါ, သင့်ရဲ့ရက်စွဲလည်းသူတို့ရဲ့နှစ်သက်ရာထုတ်ဖေါ်ကြမည်. ထိုလက္ခဏာနှင့်ဆိုးကျိုးမှတ်သား ယူ. - သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်၌ဝှက်ထားသော၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံတဲ့ဒုတိယရက်စွဲအဘို့ကြီးစွာသောစိတ်ကူးဖြစ်နိုင်.
ဒါဟာသိပ်အဆင်မပြေမေးခွန်းတူပုံပေါက်ပေမဲ့အရေးကြီးပါတယ်. သင့်ရဲ့နေ့စွဲသူတို့ကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်းယှဉ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ရန်ရွေးချယ်လျှင်သိမှတ်ကြလော့ဒါပေမယ့်တက်တက်ကြွကြွရှာဖွေနေ, သင်သည်ဤပထမဦးဆုံးနေ့စွဲသို့အမြော်အမြင်ရှိရှိသင့်ရဲ့အချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြတယ်ဆိုရင်သင်တို့သိစေမည်. သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုက်ညီသောသေချာစေချင်. သင်၏နှစ်ဦးသည်နောက်ပိုင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုလိုနှင့်များစွာသောရက်စွဲများဒီထွက်တွေ့ရှိရန်အဘို့အသင်လုပ်ချင်တဲ့နောက်ဆုံးအရာဖြစ်၏.
ဤမေးခွန်းကိုမေးခြင်းကြောင့်နောက်တဖန်အသည်ကြီးလှပေ, သင်သည်သင်၏ယနေ့အထိအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လှည့်နေကြတယ်. သင်တို့သည်လည်းမိသားစုမှာမိမိတို့အကြံအစည်သို့တွေကိုလက်တို့နေကြတယ်. နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုစတင်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တောင်သူတို့ဟာပင်ထုတ်ဖေါ်နိုင်ပါသည်. ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ခေါင်းစဉ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတစ်ဦးသည်ကြီးစွာသောဇာတ်လမ်းအမြဲရှိပါတယ်ကတည်းကအဲဒီမေးခွန်းကိုသင်နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်တွေအများကြီးကိုပေးမည်.
ဒါဟာ oldie ဒါပေမယ့်၎င်း၏ Goodies ဖြစ်ပါသည်. သင်ရက်စွဲအစမှာဤမေးခွန်းမေးရန်လိုလျှင်ထိုသို့ကောင်းသောစိတ်ကူးင်. လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာမှပူးတွဲပါနှင့်သူတို့နက္ခတ်ဗေဒင်အတွက်မယုံကြည်ကြဘူးလျှင်ပင်, သူတို့နေဆဲသင်သည်သူတို့၏အရိပ်လက္ခဏာအကြောင်းကိုယ်သိသောအရာကိုကြားသိရဖို့လုံးဝဖွင့်. ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာမိမိကိုယ်ကိုအခြား extension ကိုများနှင့်လူသားများအဖြစ်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်လောက်အသစ်သောအရာသင်ယူခြင်းထက် သာ. ချစ်တစုံတခုမျှမရှိ.
ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်. ထိုသူတို့သည်ထွက်သွားသည်အခြားသူတစ်ဦးတွှေချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ daters တွေအများကြီးကိုတောင်းဆိုနေတာကိုရှောင်ကြဉ်ရာတစ်ခုခုင်. သို့သော်ဤမေးခွန်းမေးသင့်သည့်ရက်စွဲ၏မျက်လုံးကိုဘမ်းဆီးသောလူထုအမျိုးအစားအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်စေနဲ့ရှိရာအရပ်၌သင်တို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်တက်သီးနှံများကိုပုံပါလိမ့်မယ်. သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်ဝန်ခံသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုလည်းဝေဖန်ပြစ်တင်မဖြစ်စမ်းကြည့်ပါ. ဤအချက်သည်၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံသည်နှင့်ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်လက်ခံသင့်ပါသည်. ဤမေးခွန်းဖြစ်လာနိုင်ပြီးနောက်, ဒီပထမဦးဆုံးနေ့စွဲများစွာပိုမိုတစ်ခုခုသို့စိမ်းလန်းဖို့အလားအလာရှိပါတယ်လျှင်သင်သေချာဘို့အသိရကြလိမ့်မည်.